Isku-dhac dhimasho iyo dhaawac saababay oo ka dhacay xaafadda Horumar ee magaalada Galkacyo. – Radio Daljir
Isku-dhac dhimasho iyo dhaawac saababay oo ka dhacay xaafadda Horumar ee magaalada Galkacyo.
Galkacyo, Feb 08 ? Inta la hubo 2 qof ayaa ku dhimatay 5 kalena waa ay ku dhaamacmeen is-rasaasayn maanta ka dhacday xaafadda Hormar ee magaalada Galkacyo, kaddib markii isku-dhaceen ciidanka amniga ee xaafaddaasi iyo mellayshiyaad hubaysan.
Ma cadda sababta isku-dhacaasi ku bilawday, hase ahaatee warar kala duwan oo uu helay Radio Daljir ayaa qaarkood sheegayaan rasaastu in ay bilaabatay kaddib markii mellayshiyaad hubaysan ay soo weerareen fariismo ciidanka amniga ay xaafaddaasi ku lahaayeen.
Wali waxaa halkaasi laga maqlayaa rasaas goos-goos ah, mana jirto faahfaahin rasmi ah oo wali maamulka Puntland ee gobolka Mudug ka soo baxay oo iftiiminayo sababta isku-dhac iyo sii socoshada rabshadda midna.
Xaafadda Hormar oo darafka u haysa meelaha ay iska-galaan maamullada Puntland iyo Galmudug, in muddo ah waxaa ka jiray hawlgallo roondayn ah oo ciidanka amnigu ku hawlanaayeen kuwaasi oo socday maalin iyo habeenba, loogana gollahaa adkaynta amniga iyo nabadgalyada xaafaddaasi.